कहाँ खर्च हुन्छ ब्यांकबाट प्रवाह हुने कर्जा?
बिर्सिइने छैनन् उज्ज्वल ! महात्मा गान्धी भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, 'मेरो जीवन नै मेरो सन्देश हो।' राजनीतिमा साध्य मात्र नभएर साधनको पनि शुद्धता, रचनात्मकता, अहिंसा र भाइचारा उज्ज्वलको जीवनको सन्देश हो।
चथाः पर्व अर्थात् सानो दशैं आज भाद्र शुल्क चौथीका दिन नेवार समाजले मनाउने चथाः पर्वलाई चौथी लगायतका अनेक विषय र प्रसंग जोडेर विकृत बनाउने उपक्रम चलेको छ ।
जीवित छँदै 'दिवंगत राष्ट्रपति' भारतका तेस्रा राष्ट्रपति जाकिर हुसेन नेपालको राजकीय भ्रमणमा आउँदा अखबारमा समाचार त छापिए, तर निकै गडबडी भयो।
पशुपति विनाश गुरुयोजना ! पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना पशुपतिनाथ मन्दिरलाई साध्य नभई साधन ठान्दै यस क्षेत्रमा नाफामुखी व्यवसाय संचालन गर्न तयार पारिएको जस्तो देखिन्छ ।
न्यायमूर्तिहरु, न्यायालयको साख बचाऔं ! फैसलाहरु सुनाइने तर पीडितले 'न्याय' विरलै मात्र पाउने अवस्थामा रहेको न्यायालयलाई राजनीतिक मोलाहिजा र विकृतिबाट निकाल्न न्यायालय आफैं कस्सिनुपर्नेछ।
तारा एअरको जहाज खोज्न सेना र प्रहरी परिचालन प्रतिकूल मौसमका कारण हवाइमार्गबाट तारा एअरको जहाजको खोजी कार्य प्रभावित भएपछि स्थलमार्गबाट सेना र प्रहरी परिचालन गरिएको छ।